M mebiri WordPress 2.1 | Martech Zone
Ọ dị mma, onye ọ bụla kwụrụ snickering…. Amaara m na nke a bụ isiokwu ndabara. Kama ịnwa 'idozi' isiokwu ochie m na koodu omenala niile m tinyere ebe ahụ, ekpebiri m ịhapụ ya kpamkpam. Ya mere, na-anagide m ruo nwa oge ka m na-ewu isiokwu mbụ m maka WordPress. Aga m edebe isiokwu a jọgburu onwe ya iji kpalie onwe m iji mee isiokwu ahụ ma pụọ ​​ngwa ngwa. Amalitere m ya n'abalị ụnyaahụ!
Jenụwarị 25, 2007 na 3:42 PM
Jisie ike. Ihe niile gara m nke ọma, mana m nọ na-eche anya mberede ahụ. M mgbe niile na-enyo enyo ihe na-aga na-aga horribly na-ezighị ezi mgbe m melite WordPress, ma otú anya ya mgbe nwere.
Jenụwarị 25, 2007 na 4:20 PM
Ọ na-eme [ma ọ bụ] Amaara m ihe nke ahụ dị. Jisie na obi uto na ohere a iji megharia anya na mmetuta gi.
Jenụwarị 25, 2007 na 5:05 PM
Great post title links Image njikọ ndị a bit buggy mgbe m WordPress nweta nkwalite, ma ma ọ bụghị na ọ bụ mara mma ilefu.
M tụkwasịrị obi gị ọhụrụ isiokwu ga-ele anya na slickmatic!
Jenụwarị 25, 2007 na 5:10 PM
Jisie Doug. Anọ m na-etinye mmelite na WordPress 2.1 n'ihi na m na-echegbu onwe m banyere ịta ahụhụ otu ihe ahụ.
Emeela m ole na ole WordPress gburugburu n'oge gara aga, yabụ nweere onwe m ịkpọku m ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọ bụla.
Jenụwarị 25, 2007 na 6:00 PM
Echere m na isiokwu “ndabara” gị dị oke mma! Ọ dị ka ajọ njọ n’echiche. Echere m na ị gosipụtara na ọbụlagodi isiokwu “ndabara” nwere ike ịdị mma na ntanetị.
Ma, ịnwe isiokwu ahaziri iche ịmepụta njirimara - nke ahụ bụ ihe ịde blọgụ bụ na anyị niile kwesịrị ịnwe blọọgụ pụrụ iche nke anyị nwere ike igosi ụwa n'ezie!
Ana m atụ anya ịhụ isiokwu ọhụrụ gị.
Jenụwarị 25, 2007 na 6:02 PM
Echere m na ị pụtara ụtaba, akwụsịrị m afọ 30 gara aga maka ị cigụ sịga, ma anaghị m a inụ sịga
Jenụwarị 25, 2007 na 6:03 PM
Chaị - nkwado dị egwu. Daalụ onye ọ bụla! Ọ na-amasị m ịdị mfe nke isiokwu a. Aga m ahụ ma ọ bụrụ na m nwere ike itinye ụfọdụ nke ịdị mfe na isiokwu m - nke ikpeazụ m bụ ntakịrị ọrụ!
Chaị! Nke a bụ otu ihe mara mma WordPress isiokwu ị na-agba !!! Gịnị ka a na-akpọ ya? 🙂
Oh snickering abụghị anwụrụ, m kwụsịkwara snickers Ogwe
Jenụwarị 25, 2007 na 7:14 PM
Aghọtara m nke ọma. Abụ m saịtị ọhụrụ m dị njikere ịga ruo mgbe m mebiri isiokwu m. Obere ntan mere ka ihe ka njọ. Aghaghị m iwughachi ya. N'oge niile m na - agaghị ede blọgụ - saịtị dị ala. Ihu ọma, ọ fọrọ nke nta ka m bụrụ otu ọnwa na-enweghị weebụsaịtị. Ma abụ m onye mmepe azụmaahịa weebụ.
Jenụwarị 25, 2007 na 7:20 PM
Oh nwoke! Ọ bụ naanị John Chow kụrụ m! Chei !!!
Achọpụtara m nke a dị ọcha karịa nke ochie. Olileanya na ị na-esi ihe dị ọcha ma mara.